CAANKU MA CUNO, CUNO XUMO IYO MIISAANKA LUMIYO: SABABTA CUDURKA, WAXA LA SAMEEYO - XOOLAHA
Lo'da ayaa si xun u cunta: sababta, maxaad samaynaysaa
Cunitaanka cunnida si deg-deg ah u cuniddu waa dhibaato halis ah, taas oo lagu sharaxi karo saameynta kala duwanaansho kala duwan ee xayawaanka. Fahamka sababaha asalka ah ee dhacdadani waxay lagama maarmaan u tahay waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah, si aanay u sii xumeynin xaaladda oo aan lumin xijiyada.
Ogow waxa lo'da cuni karo, iyo sababaha asaasiga ah u noqon kara saldhig u ah yaraynta cunto xumida ama maqnaanshaha dhammaystiran.
Maxa lo'da cuno
Cuntada ugu weyn ee lo'da ee xagaaga waa caws, oo ay cunaan maalinta oo dhan daaqa. Si kastaba ha ahaatee, iyaga uma aha tan kaliya ee tamarta.
Cuntada khudradda ee hal qaab ama mid kale ayaa la heli karaa sanadka oo dhan, sidaas darteed maqnaanshaha casiir iyo cagaaran waxay had iyo jeer badali karaan kuwo adag.
In cuntada ee lo'da, kooxdani waxay quudineysaa inta badan caanaha iyo caws. Labada qayboodba waa inay ahaadaan tayada iyo tayada ugu sareysa, taas oo siin doonta xayawaan leh fiyuus ku filan, borotiin iyo fitamiino.
Qiimaha nafaqada ee cagaarka wuxuu si toos ah ugu xiran yahay xilligii beerto, taas oo qayb ka ah dhirta iyo xaaladaha kaydinta ee qalabka ceeriin la qalajiyey.
Waa muhiim! Marka goosad laga qodo lo'da, iska ilaali dhirta sunta leh. Kuwaas waxaa ka mid ah: burcadka, shinni-geedka, gorchak, henbane.
Qiimaha ugu qiimaha badan ee lo'da waa badeecadda laga helo ururinta geedaha soo socda:
badarka (foxtail qaxwaha, cawska timo, fescue, cawska fadhiya cawska, bluegrass cows);
digirta (alfalfa, dhirta, dhajinta);
caws iyo cajiimeyn.
Kooxdani waxay ka kooban tahay cowska cagaaran iyo geedo gaar ah oo ku habboon quudinta lo'da. Dhamaantood waxay ku kala duwan yihiin qiimaha nafaqada sare waxayna ka kooban yihiin borotiino heer sare ah, amino acids, macdanta iyo fitamiinada.
Waxay sidoo kale noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad wax ka barato sifooyinka quudinta ee lo'da qalalan, sida iyo waxa la quudiyo lo'da xilliga jiilaalka, waxa wax lagu daro quudinta waa lagama maarmaanka u ah lo'da, iyo sidoo kale, kaas oo lo'da la siinayo qashinka dabocase iyo milixda.
Qiimaha ugu qiimaha badan ee lo'da ayaa noqon doona cunto cagaaran sida:
Haddii xilliga jimicsiga ugu badan ee kor ku xusan waa la heli karaa lo'da, xilliga qaboobaha bixinta cuntada sida xadidan - dabcan, haddii aadan ku hawlan beerashada gaarka ah ee habka hidroponic.
Ujeedooyinkan, si fiican u habboon ee miraha, roodhida, digirta iyo dalagyada kale, u oggolaanaya in ay ka helaan 1 kg oo ah miraha qalalan ilaa 6-12 kg ee cagaarka.
Qufac succulent waa wax soo saarka asalka oo leh maadada sare ee dareeraha ee ka kooban. Qaxwaha, silage, dalagyo xidid oo cusub iyo khudrado iyo ubaxyo ayaa loo isticmaalaa in lagu quudiyo lo'da.
Cuntooyinkaasi waxay ku jiraan cuntooyinka lo'da ee laga yaabo inay joogaan:
galley iyo silage alwaaxa (xilliga jiilaalka);
dhirbaaxo diyaar ah oo isku dardar ah oo la isku daro, miro, dhir, alfalfa.
Ma taqaanaa? Waxaa jira 25,000 oo ah buro dhadhan ah ee carrabka carrabka, iyo in ay ka caawiyaan naftooda inay cunaan cunto, xayawaankani waa inay u qoondeeyaan ilaa 150 litir oo candhuuci ah maalintii. Dabcan, cuncunka cuntada, calyada badan ayaa loo baahan yahay.
Alaabooyinkaas oo dhan waxay leeyihiin suuxdin sare iyo sifooyin cunto oo si fiican u cuneen xayawaan, kicinta cuntadooda. Dhibaatada ugu weyn ee raashinka suuban waa wakhti xaddidan oo xaddidan, sidaas darteed ka hor intaan soo saarin waa lagama maarmaan in la hubiyo jiritaanka quudinta sida joogtada ah ee kalluumeysiga iyo calaamadaha kale ee bilawga ah ee bakhti.
Qaybaha la isku qasbay waa isku dhafka miraha iyo wax soo saarka hadhuudhka iyo bakteeriyada. Cunto noocan oo kale ah waxay leedahay marar qiimo nafaqo leh waxayna ku jiri kartaa ilaa 16% biyaha iyo 15% ee fiber, kuwaas oo ay ku soo milmaan jirka inta u dhaxaysa 70-90%.
Qiimaha nafaqada guud ee nafaqada ah waa 0.7-1.3 quudinta quudinta 1 kg.
Qiimaha ugu qiimaha badan ee lo'da waxay noqon doontaa isku dhafan qaybaha soo socda:
hadhuudh la jarjaray - qiyaastii 50%
cawska iyo cayayaanka kale ee la wadaagayo qaybta kale ee booska cuntada ku jirta.
Qiimaha nafaqada ee isku-dhafan ayaa ka sarreeya kuwii hore, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan u ah diyaarinta qashinka kaydka ah ee lo'da.
Marka lagu daro alaabooyinka horey loo qoray, waxa ay faa'iido u leedahay in ay soo saaraan badeecooyin xoolo asal ah nuuca lo'da. Looma tixgelin karno quudin dhamaystiran, laakiin doorka kudheerka ah, waxay ku haboon tahay si fiican. Si loo helo cunto dheellitiran, lo'da waxay u baahan yihiin:
qashinka wax soo saarka kalluunka
Dhamaantood, noocyada noocaas ah waxay bixiyaan jirka xayawaanka leh borotiinka ku filan, macdanta iyo fiitamiinada. Waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay beeralayda waa in ay si haboon u galaan cunnooyinka lo'da, iyada oo aan xadgudub lahayn. Tani waa habka kaliya ee lagu hubin karo miisaan wanaagsan iyo caano.
Caantu ma fiicnayn ama ma cunayso
Waxaa jira sababo badan oo ah lo'da in ay diidaan cuntada, in xitaa beeralayda khibrad leh aysan had iyo jeer awoodin inay si deg deg ah u ogaadaan waxa ay tahay. Cunto xumo ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay isbaddal muuqda ee cuntada, iyo sidoo kale dhibaatooyin halis ah. Waxaa jira dhowr sababood oo asaasi ah oo ay tahay in si taxadar leh loo baaro.
Joojinta shubka jirka
Dhibaatooyinka habka dheef-shiid kiimikaadka ee jidhka xooluhu waa inta badan natiijada dhibaatada hadda jirta, halkii ay ka ahaan lahayd arrin madaxbannaan oo yareyneysa rabitaanka cuntada (tusaale, xaalad la mid ah ayaa lagu arkay ketosis).
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xaalado marka dhibaatooyinka dheef-shiid kiimikaadka ay sababaan tallaabooyin aan habooneyn oo beerta laftiisa ah, taasoo soo saartey quudin badan oo borotiinka ah si ay lo'da u keento. Intaa waxaa dheer, xanuunka caadiga ah ee dheef-shiid kiimikaadka caadiga ah wuxuu noqon karaa natiijo ah isticmaalka joogtada ah ee tayada hooseeya ama quudinta aan caadiga ahayn ee lo'da. Calaamadaha bukaan-socodka ee xanuunka dheef-shiid kiimikaadka waxay ku xirnaan doontaa dhowr arrimood:
Tirada maadooyinka ketone ee ku jira dhiigga;
yareynta gulukooska iyo yaraanta dhiiga dhiiga;
joojinta shaqada caadiga ah ee xubnaha gudaha.
Xayawaannada noocaas ahi si dhakhso ah looma dhumo muuqaal soo jiidasho ah (dermatitis iyo lumis timo badanaa la fiiriyaa) oo yareeya dhalidda caanaha, shubanka soo noqnoqda si dhakhso ah ayaa loo bedeli doonaa calool-fadhiga, haragga maqaarku wuu yaraanayaa, beerkuna wuxuu kordhi doonaa.
Xaaladaha aan sharciga lahayn ee xabsiga
Fayadhowrka ee barnadu badanaa waa sababta ugu weyn ee cudurrada badan, gaar ahaan infekshannada caloosha.
Baro sida loo dhiso barnad lo'daada.
Dabcan, iyada oo wax kasta oo ku fashilmay jidhka ama wax muujinaya xanuunka xayawaanka ayaa diidi doona cunista.
Intaa waxaa dheer, lo'da qaarkood ma rabaan in ay cunaan wasaqda wasaqda ah iyo xayawaanka, sidaas darteed cuntada oo dhan waa inay ahaataa mid cusub, oo barnkuna waa inaad si dhab ah dib u soo celisaa nidaamka.
Isbedelka cuntada cuno
Qumida lo'da ayaa si dhakhso ah u bilaabata cuntada, adoo la qabsaday iyo dhammaan geeddi-socodka ka jira gudaha. Sidaa daraadeed, hirgelinta degdega ah ee badeecada cusubi waxay keeni kartaa shuban sii dheer, taas oo ay si xun u saameyn doonto xaaladda guud ee lo'da. Isbeddel kasta ee alaabta lo'da waa inuu noqdaa mid siman, loona fuliyo 1-2 toddobaad.
Waa muhiim! Dhadhanka cuntaduna waxay sidoo kale saameyn doontaa dhadhanka caanaha xoolaha, sidaas darteed haddii aad rabto in aad hesho waxyaabaha kaliya ee dhadhan fiican leh, dhirta sida qadhaadh sida dixiriga waa in laga reebo cuntada.
Joojinta ama sumowga
Sababta diidmada cuntadu waxay noqon kartaa mid ka sii daraysa lo'da, sababtoo ah miirista ama sumowga. Xaaladda kowaad, socod dheer oo hawada nadiif ah ayaa kaa caawin doonta in aad yareyso dhibaatada lo'da, halka kiis labaad, dhexgalka daaweynta isticmaalka daawooyinka laga yaabo in looga baahdo in ay caadi u yeelato caloosha.
Ku sumoowga kiimikada kiimikada waxay sidoo kale u baahan tahay in laga saaro suntan jirka, taas oo daawooyinka gaarka ah loo isticmaalo.
Si looga hortago dhibaatooyinkaas, ka hor intaanay soo saarin raashin xayawaan ah, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo tayada sare, maqnaashaha caarya iyo calaamadaha kale ee sii xumaanaya.
Waxyaabaha shisheeye ee caloosha lo'da
Daryeelka iyo milkiilayaasha masuulka ka ah ka hor intaan la cuni karin waa in ay markasta baaraan daaqa oo ay ka reebaan suurtogalnimada joogitaanka walxaha shisheeye. Si kastaba ha ahaatee, xitaa xaaladdan ma jirto damaanad ah in xayawaanku uusan helin qalab diirran, bir ah oo dhalo ama silig cawska sare leh.
Mid kasta oo ka mid ah alaabtan, helitaanka nidaamka dheef-shiid kiimikaadka, waxay si fudud u dhaawici karaan xuubka xuubka, taas oo ay sabab u tahay in lo'da ay noqoto mid dheeri ah, joojiso cunista iyo yaraynta caanaha. Cirridku waxaa laga yaabaa inay gabi ahaanba maqnaato, ama ay noqoto mid daciif ah.
Kalkaalisada umusha, dhalmada ka hor
Xilliga dhalmada iyo xilliga umusha ka dib, lo'da waxay u baahan tahay daryeel gaar ah mulkiilaha. Tani macnaheedu waa xaaladaha xabsiyada, daaqa iyo cuntada waa in ay ahaataa heerka ugu sareeya, maadaama ay suurtogal tahay in qulqulatadu ay aad u sarayso. Intaa waxaa dheer, waa in aynaan ka saari karin suurtogalnimada horumarinta isugeynta dhalmada iyo dhalmada kadib. Asal ahaan, cudurkaani wuxuu u muuqdaa in uu cuno isla markiiba ka dib dhalmada, iyo sababaha ay dhacdadu weli wali cadeynin. Xayawaan buka oo jirran, curyaan ah ee addimada, luqadda, dhirbaaxada iyo carqaladaynta nidaamyada dheef-shiid kiimikaadka ayaa la arkay, taas oo u adeegta sababo diidaya cuntada.
Xanuunka duufaanka ee lo'da waa mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee miisaan culus, murugada iyo diidmada cuntada. Xaaladaha qaarkood, xayawaanku waxay yeeshaan calool-galin (ama waliba shuban), iyo marka xaaladdu ka sii darayso, dhiig-baxa ayaa kobcaya.
Badanaa, xuubka xuubka ayaa xiiran kara caleemo, dhogorta ayaa bilaabmeysa inay soo rogto oo lumiso afkeeda caadiga ah.
Waa muhiim! Haddii aysan jirin calaamadaha dibadda ee jiritaanka gooryaanka, laakiin tayada dhadhanka caanuhu way sii xumaatay, tiraduna way hoos u dhacday - tani waxay sabab u tahay in laga shakisan yahay dhaqdhaqaaqa dulinka jirka ee haweenka iyo in la qaado tallaabooyinka habboon (ugu yaraan la tasho dhakhtarka xoolaha).
Ereygan waxaa loola jeedaa cudur ku dhaca xayawaanka, taas oo lagu garto kororka miisaanka ketone ee dhiiggooda, iyada oo la isku khilaafsan yahay carbohydrate, borotiin iyo dheef-shiid kiimikaad. Mid ka mid ah sababaha suurtagalka ah ee horumarinta ketosis waxay u adeegi kartaa nafaqo la'aan, taas oo ah sababta lo'da u cuni karin oo keliya wax xun, laakiin sidoo kale waxay yareeysaa dhalidda caanaha. Waa suurtogal in la ogaado cudurka sida calaamadaha astaamaha ah:
diidmada degdegga ah ee cuntada;
hoos u dhaca caanaha;
muuqaalka nacaybka iyo isfahanka;
diidmada biyaha ama isticmaalka badan;
Lo'da ketosis ayaa si dhakhso ah u lumisa miisaanka, waxay u egtahay mid daciif ah oo la gooyey. Mararka qaarkood xayawaanku waxay noqdaan kuwo walwalsan oo aan xasillooneyn, ka dibna dhalmada ka dibna waxay diidaan inay daaqaan daaqada waxaana loo qaadaa inay cunaan wax aan la karin. Marka daaweynta goor dambe ee ketosis ay keeneyso saameyn aan laga bogsan karin jirka.
Tympania ee calaamadda
Qalab yare waxaa la yiraahdaa xaalad ba'an ama daba dheeraatay, oo muujinaysa koritaanka dhinaca bidix, qalabka foosha gaajada iyo guud ahaan welwelka lo'da.
Rumen Timpany wuxuu noqon karaa cudur madax-bannaan oo sababay dheef-shiid kiimikaad, ama ficil ahaan sabab u ah waxyaabo kale oo cudurro ah: tusaale, xannuun joojinta hunguriga ama cagaarshowga.
Labada xaaladoodba, xayawaanku wuxuu diidaa inuu wax cuno, uu noqdo mid degan, badanaa wuu jiifaa, marka uu soo baxo, wuxuu garaaci karaa caloosha caloosha. Isla markiiba, neefsashada degdegga ah iyo qotodheerka ayaa la arkay, tirade garaaca wadnaha ayaa si weyn u kordhaya. Ballaarinta qolalka qiyaasaha ee hoos yimaadda saamiga gaasaska ku ururay iyaga ayaa keenaya in lagu xakameeyo xubnaha kale iyo socodka dhiigga, oo ay ugu wacan tahay cudurku u baahan yahay daaweyn degdeg ah.
Ma taqaanaa? Haddii xaaladaha shaybaarka si taxadar leh u baaraan waxyaabaha ku jira caleenta lo'da, waxay soo baxday in hal garaam oo ku jira 10 bilyan oo bakteeriya ah iyo in ka badan hal malyan oo yaryar oo bacrimin ah - ciliates. Badankoodu ma aha oo kaliya wax aan waxba taraynin lo'da, laakiin sidoo kale faa'iido leh, sababtoo ah waxay u mahadcelineysaa in xayawaanku ku baabbi'iyo qadar badan oo quudin qudaar ah.
Xaaladdan cudurada wadnaha waxay ugu horreyn la xiriirtaa qandho aan caadi ahayn, qallal-celin-darro ah ee beeryarada, taas oo lagu sheegayo kuwan soo socda:
gobolka niyad jabsan;
buuxa diidmada quudinta iyo biyaha.
Lo'da ayaa si degdeg ah u lumisa miisaanka oo miisaanka culus, wax soo saarka caanuhu wuu istaago. Dhammaan geeddi-socodka dheef-shiidka ee gudaha ku jira ayaa hoos u dhacaya, haddii xayawaanka aan la helin gargaar caafimaad oo waqtigiisu socdo, way dhiman kartaa.
Si looga hortago horumarinta dhibaatadan, waa inaadan xumayn nuujinta oo adkaata dheefshiidka (caws, caws ama qasacad), iyo sidoo kale caanaha qudaarta ama tayada hooseeya ee lo'da, cabo biyo wasakh ah.
Mastitis waa nidaam barar ah oo ka dhacaya candho xoolo ah. Waxay noqon kartaa natiijo ka timaad cudurada xubinta taranka, waxayna muujin kartaa lafdhabarta awgeed ama sababtoo ah dayactirka dheeraadka ah ee xaaladaha aan caafimaad lahayn (oo ay ku jiraan xilliga caanaha).
Astaamaha ugu weyn ee naqaska waxaa ka mid ah:
jiritaanka xinjirta dhiigga iyo borotiinka caanaha;
heerkulka jidhka oo kordhay;
raashin xumo, ilaa iyo gebi ahaanba diidmada cuntada.
Lo'da waxay noqotaa ciriiri la'aan iyo caajisnimo, been badan ayay ka fiican tahay, waxayna bixisaa caan aad u yar. Xaaladaha qaarkood (badanaa marka uu cudurku socdo), geedi socodka caanuhu wuxuu xanuujiyaa xanuun.
Murugsanaanta daaweynta naaso-xanuunku waxay ku xiran tahay qaabkeeda (catarrhal, serous, fibrous, hemorrhagic, subclinical iyo colimastitis). Sidaa darteed, dhibaatooyin kala duwan ee jirka ee lo'da keenaya diidmada cuntada. Haddii xaaladdan oo kale ay noqoto mid caadi ah oo ay la socoto xaalad xumi oo ku timaadda guud ahaan caafimaadka xayawaanka, markaa qofku ma sameyn karo iyada oo aan loo baahnayn caawinaad dhakhtar xoolaad. Iyo sida ugu dhakhsaha badan ee aad u bilowdo daaweynta, dhakhsaha badan waxay keenaysaa natiijooyin.